Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » IATA dia mandefa ny vondrona Mobility Aids Action Group
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Mobility Aids Action Group dia handinika sy hanatsara ny dia fitaterana fanampiana ho an'ny fivezivezena, ao anatin'izany ny seza misy kodiarana, miaraka amin'ny tanjona hanatsarana ny fikirakirana ireo fitaovana tena ilaina ho an'ireo mpandeha manana fahasembanana.
Rehefa manarina indray ny seranam-piaramanidina, dia dodona ny indostria hanangana restart inclusif kokoa.
Action Group no ho voalohany amin'ny karazany mikendry ny famahana olana manodidina ny fitaterana azo antoka sy azo antoka ny fivezivezena.
Miaraka amin'ny isan'ny olona mihantitra any amin'ny firenena manerantany, ireo mpitsangatsangana manana fahasembanana dia ho ampahany lehibe ho an'ny orinasam-pitaterana an'habakabaka.
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) dia nanambara ny fanombohan'ny Vondrona hetsika ho an'ny fivezivezena manerantany hijerena sy hanatsarana ny dia fitaterana fanampiana ho an'ny fivezivezena, ao anatin'izany ny seza misy kodiarana, miaraka amin'ny tanjona hanatsarana ny fikirakirana ireo fitaovana tena ilaina ireo mpandeha sembana.
Ny Action Group no ho voalohany amin'ny karazany hikendrena amin'ny famahana ny olana manodidina ny fitaterana azo antoka sy azo antoka ny fivezivezena - olana lehibe manandanja an'ireo mpitsangantsangana mitombo. Izy io koa dia hanome torohevitra sy tolo-kevitra ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy ny mpandray anjara hafa momba ny fametrahana ny politika, ny fizotrany ary ny fenitra mifandraika amin'ny fikirakirana sy ny fitaterana ireo fanampiana amin'ny fivezivezena.
“Seza misy kodiarana an'arivony isan-taona no entina soa aman-tsara amin'ny rivotra. Na izany aza dia mbola misy ny fahasimbana na fatiantoka. Ary rehefa mandeha izany dia mahakivy ny mpandeha satria ireo fitaovana ireo dia mihoatra ny fitaovana - fanitarana ny vatany ary ilaina amin'ny fahaleovan-tenany. Manaiky izahay fa tsy eo amin'ny toerana tianay hahatongavana amin'izany orinasa izany. Izany no antony itadiavantsika zavatra momba izany amin'ny sehatra manerantany, tsy amin'ny alàlan'ny fananganana fivarotana firesahana, fa amin'ny fitambarana ireo vondrona lehibe hanao hetsika azo ampiharina, "hoy i Willie Walsh, Tale Jeneralin'ny IATA.
Mampiavaka azy ireo, ny Mobility Aids Action Group dia hampiditra ireo mpandray anjara rehetra voakasik'ity olana ity, ao anatin'izany ireo fikambanana miditra (misolo tena ireo manana fahasembanana), kaompaniam-pitaterana an-tanety, mpamatsy serivisy an-tanety, mpanamboatra seranam-piaramanidina ary mpanampy amin'ny fivezivezena. Sambany no fanasana mpanamboatra mpanampy amin'ny fivezivezena handray anjara amin'ny vondron-kery IATA.
“Ity no fiandohan'ny andro vaovao izay misy seza eo amin'ny latabatra ny vondron'olona fidirana. Ny fanambin'ny fitaterana fitaovana fanampiana dia miatrika ireo zotram-piaramanidina manerana izao tontolo izao ary ny fananana IATA hamorona an'ity vondrona hetsika ity dia mampiseho ny fahavononan'ny indostria hamaha ny iray amin'ireo lohahevitra midadasika indrindra azo idirana, "hoy i Eric Lipp, mpanorina sy talen'ny Executive Open Open Doors Organization (ODO) .